Chhaharaa | विप्लवले चुनावमा भाग लिने!
विप्लवले चुनावमा भाग लिने!
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी स्थानीय तहको चुनाव उपयोग गर्ने नीति लिने भएको छ । मोहन वैध (किरण) नेतृत्वको पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले भने स्थानीय तहको चुनाव वहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको छ । यता विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने चुनाव उपयोग गर्ने नीति सचिवालय बैठकको बहुमतबाट लिएको छ र यश विषयमा गत चैत्र ४ गते शुक्रबारदेखि केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्दैछ । कपिलवस्तुको शिवगढीमा शुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट चुनाव उपयोग गरेर संयुक्त मोर्चा गठन गरि चुनावको उपयोगमा लाग्ने निर्णय गर्न लागेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव विप्लव स्वंयमले निर्वाचन उपयोग गरेर जाने प्रस्ताव पेश गरेका छन् । स्थानीय चुनाव आउन ५२ दिन मात्र रहेको र गत वर्ष २०७७ फागुन २१ गते तात्कालिक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक मुलधारमा आएको नेकपा विप्लव समुहले लिने बाटोका विषयमा अन्यौलता देखिएको थियो । अब त्यो अन्योलता हटने भएको छ ।
विगत एक वर्षदेखि आफैभित्र अबको बाटो के हुने भन्नेमा रुमल्लिरहेको विप्लव समुहले अन्ततः अन्यौलता चिँर्दै चुनावकै बाटोबाट पार्टीलाई हिडाउने सचिवालय बैठकबाट निर्णय लिन पुगेको छ ।
बैज्ञानिक समाजवाद या पूँजीवाद ब्यवस्थाका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने कार्यनीति सहित शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विप्लव समुहले त्यसका लागि उचित बाताबरण निर्माण गर्न सकेको थिएन । मुद्दा लागेका र जेलमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ता समेत यो एक वर्षका वीचमा छुटाउन असफल भएको थियो । त्यसैका लागि सरकारसँग पटक–पटक बार्ता र सम्वादमा बस्नु वाहेक उक्त पार्टीले राजनीतिमा कुनै पहलकदमी लिन नसकेको भनी पार्टीभित्रै आलोचना बढन थालेको थियो ।
पार्टीभित्र देखा परेको अन्यौलताका कारण कतिपय नेता कार्यकर्ता नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत अन्य पार्टीतिर आकर्षित हुन थालेपछि भने उसले चुनावी बाटो अवलम्बन गर्ने भएको छ । यसका लागि विप्लवको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको २०७८ फागुन २६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको सचिवालय वैठकले निर्णय लिईसकेको छ । यद्यपी, उक्त सचिवालय बैठकमा चुनाव उपयोग गर्ने विप्लवको प्रस्तावमा दुई नेता हेमन्त प्रकाश वली सुदर्शन र धर्मेन्द्र बास्तोला कन्चनले भने मौखिक रुपमा असहमति जनाउदै फरक मत राखेका छन् ।
नेकपा विप्लव समुहको ५ सदस्यीय सचिवालय बैठकमा महासचिव विप्लव, प्रवक्ता समेत रहेका नेता खडग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र सन्तोष वुढामगर विषमले चुनाव उपयोगको नीति सही हुने भन्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने मत प्रस्ताव राखेका छन । धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चन र हेमन्तप्रकाश वली सुर्दशनले भने चुनाव उपयोग गर्ने नीति अहिले ठिक नहुने मत राखेका छन । तर सचिवालयमा बहुमतले चुनाव उपयोगको नीति पारित गरिसकेको छ । यो राजनीतिक प्रस्तावमा चैत्र ४ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसैलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्ने अनुमान रहेको छ ।
सचिवालय बैठकको निर्णय गोप्य राखेर केन्द्रीय समिति बैठक कपिलवस्तुको शिवगढीमा गरिरहेको छ । केन्द्रीय समितिमा यस बारेमा वृहत छलफल गरेर निर्णय लिने भएका छन् । तर विप्लव, प्रकाण्ड र विषम एकातिर उभिएर चुनाव उपयोगको नीति अगाडी सार्ने भएपछि उक्त पार्टीको केन्द्रीय समितिले यही निर्णयलाई सके सर्वसम्मत नभएपनि अधिक बहुमतले पारित गर्ने सम्भावना रहेको पार्टी स्रोतको दावी छ । एकाध नेताले मात्रै अब उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएपनि चुनाव उपयोग गरेर जाने विप्लवको राजनीतिक कार्यनीति प्रस्तावमा भने कसैले रोक्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।
दश वर्षे जनयुद्ध गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिलाई वीचबाटोमै ‘गद्दारी’ गरेर छोडेको आरोप लगाउँदै ०६९ असारमा सम्मेलन गरि मोहन वैध (किरण), राम बहादुर थापा,नेत्रविक्रम चन्द, देव गुरूङ, पम्फा भूषाल, हरिभक्त कडेल लगायतका नेताहरुले अलग पार्टी गठन गरेका थिए । उक्त पार्टीले ०७० साल मंसीरमा सम्पन्न भएको संविधान सभाको दोस्रो चुनाव वहिष्कारको नीति लिएको थियो ।
त्यसपछि मोहन वैधले पनि क्रान्ति अगाडी वढाउन नसक्ने भन्दै विप्लव, प्रकाण्ड, विषम, कञ्चनलगायतका नेताहरुले २०७१ मंसिर ८ मा विप्लवको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए । त्यसयता विप्लवको पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अवलम्बन गदै आईरहेको छ । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव वहिष्कार गरेको विप्लवको पार्टीले त्यसपछि बनेको संविधान, संविधान निर्माणपछिको २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनाव, त्यसपछिको संघ र प्रदेशको चुनाव पनि वहिष्कार गरेको थियो ।
विप्लवको पार्टीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भैसेपार्टीको बमकाण्डपछि २०७५ फागुन २९ गतेदेखि दुई वर्ष प्रतिवन्ध लगाएको थियो । विप्लवको पार्टीका १२ जना नेता–कार्यकर्ता यो वीचमा मारिएका थिए ।
२०७७ फागुन २१ मा सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर विप्लवको पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिक मुलधारमा आएको थियो । अहिले स्थानिय चुनाव सम्मुखमा रहेका बेला उक्त पार्टीले चुनाव उपयोग गर्ने नीति लिन लागेको छ ।
प्रतिवन्धित अवस्थामा विप्लव र प्रकाण्डका वीचमा पार्टीभित्र यदाकदा अन्तरसंर्घष देखिएपनि गत वर्ष सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएदेखि भने पार्टीले लिने कार्यनीतिका विषयमा मत मिल्दै आएको छ । चुनाव उपयोग गर्ने नीतिमा पनि यी दुई नेता एकै ठाँउमा उभिएका छन् । उनीहरुलाई ५ सदस्यीय सचिवालयमा सन्तोष वुढामगरले पनि दह्रो साथ दिएका छन् । पार्टीभित्र तेस्रो र चौथो पोजिसनमा रहेका हेमन्तप्रकाश वली र धर्मेन्द्र बास्तोलाको फरक मत देखा परेको छ । यधपी यी दुई नेताले पार्टी संगठनभित्र होल्ड राख्न नसक्ने भएका कारण विप्लव, प्रकाण्ड र विषम एकै धारमा उभिएपछि पार्टीभित्र अन्य अलगधारको जोर चल्ने अवस्था छैन ।
चुनाव उपयोगको नीति स्वंयम विप्लवले नै सचिवालयमा अगाडी सारेको र सचिवालयको निर्णयका रुपमा चैत्र ४ गते केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पेशभइछलफल भैरहेको छ । चुनाव उपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने सुदर्शन र कञ्चनको पक्षमा पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा झिनो मत मात्र रहेको छ ।
चुनाव उपयोग गर्ने नीतिसहित केन्द्रीय समिति बैठकबाट विप्लवको लाइन पारित भएर शिवगढी बैठकबाट आउने भएपछि उक्त पार्टीले स्थानीय चुनावमा कुन–कुन राजनीतिक दलसँग मोर्चावन्दी गर्छ ? भन्ने कुरामा पनि उक्त पार्टीभित्र मत फरक छ । प्रकाण्ड एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर जानुपर्ने पक्षमा लचक छन् भने विप्लवले यस बारेमा मुख खोलिसकेका छैनन । यद्यपी उनको माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णवहादुर महरासँगको सम्वन्ध र हिमचिम वाक्लो रहेको छ । महराले माओवादी शक्तिहरुको एकताको प्रयास गरिरहेकाले विप्लवको झुकाव भने प्रचण्डतिरै देखिएको छ । तर उनले पहिले चुनाव उपयोग गर्ने नीति केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित गरेपछि मात्र थप छलफल गरी चुनावी तालमेलका विषयमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताईरहेका छन् ।
चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी जादा विप्लवको हालत पनि २०७४ सालमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा
(क्रान्तिकारी माओवादी) को जस्तै हुने निश्चित छ। तसर्थ उनले एमाले वा माओवादी केन्द्र मध्ये एक पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेर आफ्ना केही नेता कार्यकर्तालाई जनप्रतिनिधीका रुपमा जिताउने गरी गठबन्धन गरेरै चुनावमा जाने तयारीमा विप्लवको पार्टी देखिएको छ ।
चुनाव उपयोगको नीति लिन लागेको विषयमा विप्लव र प्रकाण्डले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायतसँग अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराईसकेका छन् । २०७८ फागुन २६ को सचिवालय बैठकमा बास्तोला र वलीको सहमति नभएपनि बहुमतका आधारमा चुनाव उपयोगको नीति पारित गरेपछि भोलिपल्टै २०७८ फागुन २७ गते प्रधानमन्त्री देउवासँग विप्लव र प्रकाण्डले भेटवार्ता गरेका थिए । तीन वुँदे सहमति कार्यान्वयन सँगै आफुहरु चुनावमा आउँदा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले समय दिन्छ÷ दिदैन ? के हुन्छ भनी प्रधानमन्त्री देउवा र गृह मन्त्री खाँणसँग जिज्ञासा राखेका थिए । चुनावमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता अहिले बन्द गरिसकेको छ । तर विप्लवको पार्टी चुनावमा आए त्यसमा आयोगसँग आग्रह गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री देउवा र गृह मन्त्री खाँणले पनि विप्लवहरुलाई आश्वासन दिएको बताइएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकबाट चुनाव उपयोगको नीति पारित गरेर आएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग औपचारिक आग्रह गर्ने तयारीमा विप्लव र प्रकाण्डहरु रहेका छन् । त्यसो हुँदा आयोगसँग आग्रह गरेर दुई–तिन दिन दल दर्ताका लागि समय दिने गरी ब्यवस्थापन मिलाउने विषयमा भित्री तयारी भईरहेको बुझिन आएको छ ।